Uyenza njani indlela emfutshane kwiwebhusayithi kwi-Android | I-Androidsis
UGoogle Chrome ngumkhangeli we-quintessential kwi-Android. Enkosi ngayo sinokubhenela kuzo zonke iintlobo zamaqhinga, ukongeza kwimisebenzi emininzi eluncedo ekhoyo, njengezimbo zakho ezintsha zokukhangela. Into eqhelekileyo kukuba isetyenziswa rhoqo xa undwendwela iwebhusayithi kwifowuni. Ukongeza, kuqhelekile ukuba kukho amanye amaphepha owatyelelayo rhoqo kunamanye.
Kungenxa yoko, unokufikelela ngqo kwiwebhusayithi yakho oyithandayo kwifowuni yakho ye-Android inokuba ngumdla. Kuba ngale ndlela kuyenzeka ukuba ufikelele ngokuthe ngqo, ngaphandle kokwenza onke amanyathelo kuGoogle Chrome. Inyani yile yokuba oku kulula kakhulu ukufezekisa.
Uninzi lwezikhangeli ezikhoyo ngoku kwi-Android, ezimbalwa, zinokubakho yenza indlela emfutshane kwiphepha lewebhu. Nangona kule meko siza kusebenzisa iGoogle Chrome, eyeyona isetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi abaninzi kwinkqubo yokusebenza. Kodwa amanyathelo aqhelekanga atshintshe kakhulu kwezinye iindlela.
Ungasitshintsha njani isikhangeli esingagqibekanga kwi-Android
Ke ukuba uhlala undwendwela iwebhusayithi kwi isikhangeli kwifowuni yakho, unokufikelela ngokuthe ngqo ngobuqhetseba obulula. Yintoni eya kukuvumela ukuba uhlale unolwazi malunga noko kwenzekayo, kwimeko yokuba yiwebhusayithi yeendaba okanye iphephandaba. Yintoni ekufuneka siyenzile malunga noku?
Yenza indlela emfutshane kwi-Android
Eyokuqala ekufuneka siyenzile kukuvula isikhangeli esisisebenzisa kwifowuni yethu ye-Android. Kule meko yiGoogle Chrome, njengoko besesitshilo. Emva koko, kufuneka singene kwibar yedilesi, idilesi yewebhu enomdla kuthi kule meko. Ukuba ungabalandeli abakhulu benkqubo yokusebenza, ungasebenzisa I-Androidsis kule meko. Sifaka idilesi kwaye singena kwiwebhu ke.
Ngaphezulu kweGoogle Chrome, ngasekunene kwedilesi yewebhu, Siyabona ukuba kukho i icon enamachaphaza amathathu amileyo. Kuya kufuneka ke ucofe i icon. Ngokwenza oku, kuvulwa imenyu yentsingiselo, apho sinothotho lweendlela ezikhoyo. Enkosi kubo sinakho ukwenza zonke iintlobo zezenzo kwisikhangeli. Enye yeendlela esizifumana kolu luhlu kuthiwa Yongeza kwiscreen esikhulu. Olu lukhetho olunomdla kuthi.
Indlela yokuvula nokucima izaziso ze-Chrome kwi-Android
Ke ngoko, sicofa kuyo. Emva koko, siza kucelwa nika le ndlela imfutshane igama esiza kuyenza kwi-Android. Unokubheja ekunikezeni igama lewebhusayithi oyenzela ukufikelela kuyo, ukuba uyafuna. Igama eliya kuba lula kuwe ukuba uliqaphele ngamaxesha onke. Ke, xa sikhethe igama, kuya kufuneka ucofe kwiqhosha lokongeza. Ukuze le ndlela imfutshane yenziwe ngokusemthethweni kwiscreen esikhulu kwi-Android.
Ngala manyathelo sele siyigqibile inkqubo. Ngapha koko, siya kuba nakho ukubona ukuba xa sisiya kwiscreen esikhulu sefowuni yethu ye-Android, i-icon enonikezelo ngqo ivela kuyo, enegama esilinike lona. Into esivumelayo kukuba ngokuvula ukufikelela ngokuthe ngqo, siya kuya ngqo kule webhusayithi ngendlela elula. Ngaphandle kwamathandabuzo, umsebenzi obaluleke kakhulu kwisikhangeli, esiya kuthi sisebenzise xa sifuna. Ngumsebenzi esinokuwuphinda amatyeli amaninzi kangangoko sifuna.
Kuba umkhangeli zincwadi akanamida xa usenza amakhonkco ngokuthe ngqo. Ke ngoko, ukuba kukho iiwebhusayithi ezimbalwa ozindwendwelayo rhoqo kwi-Android, unokufikelela ngokuthe ngqo kuzo. Ke, endaweni yokuba uvule iGoogle Chrome kwaye ufake i-URL, ungangena kwiwebhusayithi ngokuthe ngqo nanini na ufuna.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyenza njani indlela emfutshane kwiwebhusayithi yakho oyithandayo kwi-Android
Olu khetho alufumaneki xa isiphequluli se-Chrome sifakwe kwi-Amazon Fire HD8 Android. Ewe ikwi-firefox, kodwa xa uyicela ukuba yenze indlela emfutshane, ikuxelela ukuba iyenzile kodwa ayenzelwanga yona.
Kananjalo iivenkile zokudlala azidibani nokwenza indlela emfutshane kwiwebhusayithi.
IVIVO V1901A ibonakala kwi-TENNA ibonisa ukuyilwa kwayo kunye nenxalenye yeempawu